Maarten meghere US na August 1 na usoro iwu siri ike
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Sint Maarten na -agbasa » Maarten meghere US na August 1 na usoro iwu siri ike
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Sint Maarten na -agbasa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
St Maarten ga-emeghe na August 1st, 2020, nye ndị njem si US. Nchebe nke ndị ọbịa na ndị bi na-anọgide na-ebute ụzọ maka mba ahụ. Na nkwadebe nke imeghe, nyocha saịtị mere na ụlọ obibi niile iji hụ na agbaso usoro iwu na ụkpụrụ nduzi. Site na usoro ndị a siri ike, St. Maarten gara n'ihu imeghe ya.
N'ime ngalaba ile ọbịa, ụzọ isii ka akwadoro iji gbochie mgbasa Covid-19 n'àgwàetiti ahụ gụnyere nkwụsị nke anụ ahụ na akara ala dị mma, iji ihe mkpuchi ihu na-eme ihe iwu, ngbasa mmekọrịta nke 2 mita, usoro nhazi nke onwe, usoro kwesịrị ekwesị maka ikpocha elu, ịnọ n'ụlọ mgbe iwu ọrịa, na menu dijitalụ na ozi.
Iwu siri ike dị maka njem maka agwaetiti ahụ nke Mịnịstrị Ahụike Ọha, Ọha na Nzụlite na Ọrụ wepụtara. A choro ndi obia ka ha mezue nkwuputa nkwuputa ahuike di n’uwaa 72 tupu ha abata www.stmaartenentry.com. A choro ndi obia ka ha gaa were otu nkwuputa ahu ike ha. Achọrọ ndị njem niile ka ha mezue ule COVID-19 (PCR). Onye njem ahụ ga-anata ule ahụ na nsonaazụ ya n'ime oge 72 tupu ụbọchị njem. Ọ nweghị ule ọzọ ndị ọchịchị St. Maarten ga-anabata. A ga-anwale ndị ọbịa na-enyeghị ule COVID-19 ma kpọpụ ha iche ụbọchị iri na anọ na ego ha.
Achọrọ ka ndị ọbịa niile soro ihe nkpuchi ha, ndị na-edozi ahụ na-eyi mkpuchi ha n'oge ụgbọ elu ha na n'ọdụ ụgbọ elu. A na-adụ ndị ọbịa ọdụ ka ha zụta mkpuchi njem njem niile dị ize ndụ, na-ahụ na ha kpuchiri ha ma ọ bụrụ na ha daa ọrịa n'oge ezumike. Ka ọ dị na August 1st, Princess Juliana International Airport ga-atụ anya ụgbọ elu ndị a: American Airlines ga-ebido ụgbọ elu kwa ụbọchị site na Miami na ugboro ise n'izu site na Charlotte ewezuga Tuesday na Wednesde. Mgbe August 20 gasịrị, ha ga-efega otu ugboro n'izu site na Charlotte. Delta Airlines ga-arụ ọrụ ugboro atọ n'izu site na Atlanta na Thursday, Saturday, na Sunday. Jet Blue ga-efe efe otu ugboro n'izu site na JFK Airport, yana ụgbọ elu ụgbọ elu ga-efega otu ugboro n'izu site na Fort Lauderdale.
Kemgbe June 15th, ụgbọ elu mba ofesi maliteghachiri St. Maarten mgbe ọnwa atọ nke imechi njem azụmahịa gasịrị. Jgbọelu nke ndị njem, Caribbean na ndị ụgbọelu Europe dịka Air France na KLM na-efedata n'ọdụ ụgbọ elu ọzọ. Usoro mmeghe a amalitela nke ọma rue ugbu a.